(၁၃)နှစ်သမီးလေး ကိုလိမ်ညာခေါ်ဆောင်ပြီးသား မ ယားပြုကျင့်သူ ကိုအမှု ဖွင့် – Shwewiki.com
အ မှုဖြစ်စဉ်မှာ၁၁.၃.၂၀၂၀ရက်ညနေ၆နာရီ၄၅မိနစ်အချိန်ခန့်ကမကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးခရိုင်၊ရေနံချောင်းမြို့မရဲစခန်းတွင်တွင်ဒုရဲမှုးအောင်လွင်ဦးသည်စခန်းမှုးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်မ……(ခ)…..(၁၃)နှစ်၊(၆)တန်း၊……..ရပ်၊………ရပ်ကွက်၊ရေနံချောင်းမြို့နေသူကရဲစခန်းသို့ရောက်ရှိလာာ၎င်းသည်၆.၃.၂၀၂၀ရက်ညနေ၆နာရီအချိန်ခန့်တွင်တူတော်စပ်သူ…….(၄)နှစ်နှင့်အတူနေအိမ်မှရေနံချောင်းပန်းခြံသို့သွားရောက်ကာပန်းခြံတွင်ထိုင်နေစဉ်ထူးထူး(ခ)ထူးလင်းမောင်(၁၆)နှစ်၊(၇)တန်း၊မှီခို၊…..ရပ်၊ရေနံချောင်းမြို့နေသူနှင့်ပိုင်ညီမိုး(၁၆)နှစ်၊(၇)တန်း၊ဆိုင်ကယ်ပြုပြင် ၊ရေနံချောင်းမြို့၊ ကတုံး(ခ)ထူးစစ်မိုး (၁၅)နှစ်၊(၈)တန်း၊ ……ရပ်၊…….ရပ်ကွက်၊ရေနံချောင်းမြို့နေသူတို့(၃)ဦးရောက်ရှိလာကာထူးထူးမှဘယ်ကလာတာလည်းဟုမေးမြန်း
ကာပိုင်ညီမိုးကလေးထပ်ကျောင်းဘက်သွားမယ်လိုက်မှာလားဟုခေါ်သဖြင့်ပိုင်ညီမိုးမောင်းနှင်သောဆိုင်ကယ်ရှေ့တွင်ကတုံးကထိုင်ကာတရားလိုမ….ကအလယ်ကထိုင်ပြီးတူဖြစ်သူကိုပေါင်ပေါ်တင်ကာအနောက်ဆုံးကထူးထူးကထိုင်ကာလိုက်သွားခဲ့ကြောင်း၊ထိုသို့လိုက်သွားခဲ့ရာလေး ထပ်ကျောင်းဘက်မမောင်းဘဲမြို့တောင်ဘက်သို့မောင်းလာကာသစ်တပွေရပ်၊ငွေဘုံသာအရုပ်၊တရုတ်သင်္ချိုင်းကုန်းနဘေးလမ်းမ( ရဲစခန်းတောင်ဘက်၃ဖာလုံခန့်အကွာ) မြေနိမ့်သို့မောင်းနှင်ခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်ကိုလမ်းဘေးတွင်ရပ်ကာထိုင်စကားပြောခဲ့ကြောင်း၊ထိုသို့စကားပြောစဉ်
ထူးထူးမှ ချစ်တယ်ဟုပြောကာဘယ်ဘက်လက်ဆွဲကိုင်ဖက်ကာပါးစပ်ကိုနမ်းခဲ့ကြောင်း၊ကတုံးကလည်းချစ်တယ်ဟုပြောကာယာဘက်လက်ကိုဆွဲကိုင်ဖက်ကာရင်သား၊တင်ပါးနှင့်မိန်းမကိုယ်အားပွတ်သပ်သောကြောင့်ရုန်းကန်ပြီးထိုင်စကားပြောဆိုနေရာခဏအကြာပိုင်ညီမိုးကဆေးလိပ်သောက်ချင်တယ်ဟုပြောသောကြောင့်ကတုံးအားဝယ်ခိုင်းခဲ့သောအခါထူးထူးမှဆိုင်ကယ်မောင်းပြီးကတုံးမှနောက်မှထိုင်ကာဆိုင်ကယ်မောင်းပြီးထွက်သွားစဉ်ပိုင်ညီမိုးကမ…..(ခ)……ကိုချစ်တယ်ဟုပြောကာထမိန်လှန်ကာသားမယားအဖြစ်တစ်ကြိမ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း၊ခဏအကြာထူးထူးနှင့်ကတုံး ရောက်ရှိလာပြီးပိုင်ညီမိုးမှပြန်မည်ဟုပြောဆိုခဲ့ရာထူးထူးကမ….(ခ)…….အားနောက်နေ့ညနေ(၆)နာရီပန်းခြံလာခဲ့ဟုပြောကာ၎င်းတို့ထွက်သွားကြသောကြောင့် မ…. (ခ) မ…..သည် အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ကြောင်း။
လေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒက် ……အောင်ကျော်ဦး(ရေနံချောင်း)
လေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒက် ……မှုခင်းရှုထောင့်ဂျာနယ်
မြန်မာနိုင်ငံ ကို ဒုတိယ အီတလီမဖြစ်စေချင် ပါ